Welcome to Aayaha Nolosha » GURI AROOS KA DHICI LAHAA OO GANTAALLO LAGU BURBURIYAY
GURI AROOS KA DHICI LAHAA OO GANTAALLO LAGU BURBURIYAY
Lamaane ku heshiiyay guur ayaa gurigii ay ku aqal geli lahaayeen oo ay ku diyaariyeen dhammaan agabkii arooska ayaa waxaa burburiyay gantaalo lagu soo tuuray degaankii ay deganaayeen.
Arooska lamaanahaa oo ka harsanaa maalmo yar ayaa gantaalada Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil ay burburiyeen, waxayna mugdi u horseedeen farxaddii labadaasi lammaanayaashaa is calmaday ee guurka diyaarka u ahaa.
Wiilka arooska oo lagu magacaabo Faadi iyo gabadha oo la yiraahdo Yara ayaa gurigii quruxda badnaa ee ay arooskooda u gogleen waxa uu isku baddelay ciid iyo dambas kadib markii uu haleelay mid ka mid gantaalada ay ridayeen Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil.
Faadi Al-gasali oo qoyskiisa kula nool magaalada Gaza ee Falastiin ayaa xilligii duqeyntu dhacaysay waxay isaga iyo qoyskiisu daawanayeen Telefiishanka, waxaanay la socdeen xaaladda ka taagan magaaladooda iyo sidii ay u socdeen duqeymaha Israa’iil ka fulinaysay magaaladaasi.
Faadi iyo qoyskiisa ayaa waxay ku war heleen gantaal ku soo dhacay guri Dabaq ah oo ay deris ahaayeen, intaasi kadibna Faadi iyo qoyskiisa iyo sidoo kale Yara oo ah gabadha u mehersan isla markaana ay wada diyaarinayeen xafladdii iyo farxadii aqal galkooda ayaa waxay ka soo baxeen gurigii iyagoo ka cabsi qabay in gantaalkaasi ku habsaday aqalka ay deriska ahaayeen wax ka soo gaaraan, waxaanay isla markiiba u wareegeen aqal kale oo ay deris ahaayeen oo gurigooda u jiray masaafo aan ka badnayn 50-mitir halkaas oo ay u arkeen inay kaga nabad gali karaan gantaalahaasi
Markii ay Faadi qoyskiisa oo ay wehelinaysao jaceykiisii Yara ka soo baxeen gurigii ay ku aqal gali lahaayeen Faadi iyo Yara ku habsaday Gantaal ay soo ganneen Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil ee duqeynta ku hayay magaaladaasi Gaza, waxaana halkaasi ku baaba’ay riyadii ay sanado badan dhibka iyo rafaadka u soo mareen Faadi iyo Yara.
Faadi ayaa muddo sanado ah u soo shaqeysanayay sidii uu maalin uun u aroosi lahaa gacalisadiis Yara, balse gurigii uu qalabka arooska ku soo kamilay ayaa burbur iyo habaas isu bedelay, sidaasna rajadoodii ku duntay.